अमेरिका – बाह्रथरी कुरा
बाह्र सत्ताईस कुरा (83)
सामाजिक सञ्जाल (20)
सबैभन्दा बढी पटक पढिएको ।
कोरोना भाइरस र यसको संक्रमणबारे सोधिने प्रश्न र त्यसका उत्तरहरू [FAQ-COVID19]
पिसिआर नेगेटिभ: पत्रकार विशेषाधिकार
हामी यस्तै त हो नि ब्रो: कोरोनाका नाममा १२ सत्ताइस् आतङ्क
१२ थरी ‘सर्वज्ञानी’ टीमको अपिल
यो रेडियो नेपाल हो, यो रेडियो नेपाल हैन
लेखक र सम्पादकका १२ सत्ताइस् टिप्पणि
मन खोली… खेलौं होली !
पिसिआर नेगेटिभ: पत्रकार विशेषाधिकार – बाह्रथरी कुरा on कोरोना भाइरस र यसको संक्रमणबारे सोधिने प्रश्न र त्यसका उत्तरहरू [FAQ-COVID19]
मन खोली… खेलौं होली ! – बाह्रथरी कुरा on मन्नपका होली टोली
Ramesh on जहाँ पुग्दैनन कवि, त्यहाँ पुग्छन् रवी
Ramesh Bhandari on सेक्सुअल ह्यारेस्मेन्ट – अपराधी व्यक्ति कि पेशाकर्मी सबै?
Ramesh Bhandari on ओच्छयान मुतुवाको आत्मकथा
Archives Select Month May 2020 April 2020 March 2020 August 2019 July 2019 June 2019 May 2019 April 2019 December 2018 November 2018 September 2018 April 2018 February 2018 December 2017 September 2017 August 2017 July 2017 May 2017 April 2017 March 2017 February 2017 January 2017 November 2016 October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016
सुन साइलीऽऽ, निधारमा नाम्लो बरियो, ट्रम्पको सनकमा परियो ..
नमस्कार सरहरु, म्याडेमहरु, नसर नम्याडेमहरु, ह्यानहरु, त्यानहरु, फलानाहरु, ढिस्कानाहरु ..!
खासमा मलाइ नमस्कार दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु भनेर सम्बोधन गर्न मन लागेको थियो तर त्यसरी गरिने सम्बोधनले सबैलाई लपेट्न सकिँदैन भन्ने महसुस भएकोले यो लम्बेतान सम्बोधन गर्न मने बाध्य भएको छु। खासमा १२थरी शुरु हुदाँको बखत एउटाले मात्र नलेखेर सबैले योगदान गर्ने, एउटाको मात्र ट्रेडमार्क भाषामा नलेखेर सबैको मिसाएर कुन लेख कसले लेखेको हो गेस नै गर्न नमिल्ने बनाउने भन्ने सहमति भाको थ्यो । तर तेस्ता छुसी सहमति । कसले कति मेलो खन्या छ भन्ने कुरो त “अथर” हेरेर हजुरहरु जस्ता अजासु पाठकहरुले थाहा नपाउने कुरै भएन । यो चार्ली बहुलाउन त बहुलाएन, किन आफ्नो डम्फु बजाउँछ भनेर सोच्नु भो होला हैन ? के गर्नु नेपाली परियो…. पाएको ठाममा हल्का मपाइँ नगरी खाको पच्दैन हेर्नुस् ।
खैर !!! केही समय पहिले ट्रम्प हिलारी र भुँइफुट्टा नेपाली भनेर हामीले वा मैले जस्ले लेखे पनि यहाँ छापिसकेका छौँ। हिलारीको पक्षमा पाखुरा सुर्केर लागेका नेपालीको हालत त रुझेको बिरालो जस्तो भाको तथ्य घाम झैं छर्लङ्ग छँदैछ । कसैलाई नलाको राजनीति नेपालीलाई लाग्ने हेर्नुस न । उहि क्या त…. केहि थान नेपाली र अमेरिकी-नेपाली पत्रकारहरुले चुनाव अघि नै ‘आगामी राष्ट्रपति हिलारी बस्ने घर’ भनेर ह्राइटहाउस अघि फोटो खिचाएर तहल्का मच्चाएको बिर्सनु भो ? त्यो फोटो हालेको एक साता नबित्दै हो कि क्या हो हिलारीको के के भो भन्ने त जगजाहेरै छ। भनेसी बुझ्नु भो भो नि…. नेपालीको जातले कतिसम्म पनौती लगाउन सक्ने रहेछन भनेर। अब तिनै पत्रकारहरु ट्रम्पलाई हटाउन मरिहत्ते गरेर लागेको देख्दा अर्को कार्यकाल नि ट्रम्पले नै लैजान्छन् कि जास्तो लाग्ने के 😂 Continue reading →
Posted on February 17, 2017 by Charlie	1
अम्रिकाका रुन्चे झ्याँस नेपाली
हामीले आजभोलि केही नाम चलेका अनलाइन पोर्टलमा अझ विशेषगरी बेरोजगार अनलाइनमा अमेरिकी पलायनवादीको रुवाइ पढ्ने गरेका छौँ। त्यो पढ्दा लाग्छ, उनीहरुलाई फसाएर अमेरिका ल्याइयो, उनीहरुको इच्छा गाँउमै हलो जोतेर बाँझो खनेर बस्ने थियो। अमेरिकाले गर्दा उनीहरुले कुकुरले नपाएको दु:ख पाए। कतिले अकालमा ज्यान गुमाए। कसैले श्रीमती गुमाए। कतिका श्रीमान श्रीमती पारपाचुके गरे, सँस्कृति र परम्पराको खिल्ली उँडायो अमेरिकाले।
स्वर्ग भनेर आएको अमेरिकामा नर्कको आभाष भयो। कतिले अमेरिकालाई मृत्युपथ नि भन्न भ्याए भने कतिले यो ग्रिनकार्ड च्यातेर नेपाल फर्किन्छुसम्मका बोक्रे राष्ट्रवाद अलापे। तर फर्किन चाहिँ कोही फर्केनन्। यहीं बसिरहे, डलर छापिरहे, अनि निरन्तर गोहीका आँशु झारिरहे। गुनासाहरुले थिच्चिएर निस्साइएका यावत कुराहरु मध्य केही बुदाँलाइ हामीले केलाउने जमर्को गरेका छौँ। हामीले यहाँ सबै गुनासा समेट्न नसकौँला। तपाइँहरुले सुनेका र हामीले छुटाएका गुनासाहरुलाई कमेन्टमा लेख्न कत्ति पनि नहिच्किचाउनु होला।
Posted on March 21, 2016 by Charlie	13
शनीले छोपेको बेला !!
साथीको करकाप/ लहलहैमा लागेर, अरुको बहकाउमा लागेर पल्लाघरे रामेले डिभी भरेको थियो। डिभी भरेर घर आएर बा आमालाई भन्छ। आमा बा मैले त डिभी भरे नी। अनि घरमा रुवावासी शुरु हुन्छ, लौ अब छोरोलाइ डिभी पर्ने भो, अमेरीकामा दु:ख पाउने भो, पत्रिकामा खुल्ला पत्र छपाउने भो भनी कोलाहल मच्चिन्छ। आमा चिनेका सबै तिर्थमा छोरोलाई डिभी नपरोस् भनी भाकल गर्छिन्। बाउ अमेरिकामा भएका कुनै नेपालीले डिभी नपर्ने बनाइदिन सक्छन् कि भनेर च्यानल खोज्न थाल्छन्। उनीहरु आत्तिइसकेका छन्। अमेरिकाले ध्वस्त बनाउँछ भनेर। उता रामे दिनदिनै भट्टी धाउन थाल्छ, डिभी परे त मेरो जीवन नर्कै हुने भो भनेर दिनदहाडै रौसी पिउँदै हिँड्छ। जसरी बिभिन्न पत्रिकामा बिदेशमा पुगेर दु:ख पाएका कहानी देखिएका छन्, त्यसले गर्दा रामेको परिवारको निद चयन नै खोसिएको हुन्छ।
हिन्दी फिल्मको स्टाईलमा भन्दा कालो अमावश्याको रात थियो। भलै त्यो बेला अमेरिकामा दिन हुन्थ्यो, आखिर डिभिको नतिजा सार्वजनिक भयो। रामेकी आमा पूजाकोठामा लगातार ॐ नम: शिवाय जपिरहेकी हुन्छिन्। उनलाई डर छ, रामेलाइ डिभि पर्ला र उस्को कालो दिन शुरु हुन्छ भनेर। रामे हे भगवान बरु नर्कमा पठाउ तर डिभि नपरोस् भनी दश औंला जोडी कम्प्युटर खोल्छ र डिभिको रिजल्ट हेर्ने साइट खोल्छ। Continue reading →
Posted on March 16, 2016 by Charlie	3